Mutengo weWiricheya Van Kutendeuka | Karman® Mawiricheya
Zvakawanda sei zvakadhura kushandura kombi? Iyi blog post ichaputsa iyo mutengo a wiricheya van kutendeuka, saka iwe unoziva zvaunofanira kutarisira.
Wiricheya van kutendeuka shanduko zvakajairika zvakanyanya. Kwete chete idzi shanduko dzakajairika asi zvakare dzinodhura muchirongwa chikuru chezvinhu. Dzakasiyana dzakasiyana mhando yematani inogona kuchinjirwa ku kugara mawiricheya uye scooter emhando dzakasiyana uye saizi. Kana iwe uine yakazara-saizi vani, mini vani kana yekushandura van, zvigadziriso zvinogona kugadzirwa kumotokari yako.
Chinhu chekutanga kufunga nezvacho ndeichi mhando yekushandurwa iwe kwauri kutsvaga. Iwe unoda kugadzirisa kumashure, padivi kana chigaro chemutyairi? Kugadziridza kumashure kunoita kuti zvive nyore kurodha wiricheya kumashure kwevha. Side okunatsiridza kupa mukana kubva kudivi remotokari. Kana iwe parizvino uchishandisa wiricheya uye ungade kutyaira, mativi edhiraivho anogona kuve nyore kugadzirwa naizvo.
Kazhinji, divi kugadziridza mutengo zvinopfuura shanduko dzekumashure, sezvo shanduko kudivi revha iri rakanyanya basa. hwiricheya motokari mitengo yekutendeuka inotangira pamadhora zviuru gumi kusvika pamadhora anodarika zviuru makumi maviri zvichienderana nezvamunoda kuita, mhando yetekinoroji yauri kutsvaga uye nemhando yemotokari yauinayo izvozvi. Nzira yakanakisa yeku kuchinja kwemutengo kune yako kombi ndeyekutengesa uchitenderedza uye enzanisa mitengo. Kunge chero chinhu chipi zvacho, kuenzanisa kwemitengo ndiyo nzira yekuenda.
Nguva uye Kambani Sarudzo
Kutsvaga kwakareruka kweGoogle kunounza akawanda makambani anoita hunyanzvi muwiricheya van kutendeuka. Ita shuwa yekusarudza kambani inouya ine mukurumbira wakanaka, yanga iri mubhizinesi kwechinguvana uye inopa yakavimbika midziyo. Kumbira kuti uone mamwe masampula ekushandurwa aripo, kumbira mareferenzi, uye sarudza iyo shanduko inonzwisisika kwazvo kwauri.
hwiricheya van kutendeuka kungaite kunge kunodhura pakutanga, asi idzi shanduko dzinogara kwemakore mazhinji anouya. Uye zvakare, shanduko dziri nyore kumotokari yako yazvino ichaita yako upenyu zvakapusa. Nakidzwa yose rusununguko uye kurerukirwa nerudyi shanduko yevha yako.
1800wheelchair inopa dhairekitori izere yevatengesi vanozoita tihs mhando yekutendeuka. Tarisa uone apa - Wiricheya Van Directory.